७३ औं गणतन्त्र दिवसमा बोल्दै मोदीले गरे काश्मीर मामिलाको बचाव
०१ : ५४
baahrakhari.com . ५ महीना अघि
नयाँ दिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मु काश्मीरमा संविधानको धारा ३७० खारेज गरेको प्रसंगको विहीबार ७३ औं स्वतन्त्रता दिवसका दिन लाल किल्लामा आयोजित समारोहमा बचाव गरेका छन् । उनले त्...
भारत स्वतन्त्रताको ७३ औँ वर्ष, दिल्लीमा विशेष कार्यक्रम हुँदै
छिमेकी देश भारतले बिहीबार स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ । भारत अंग्रेजको शासनबाट मुक्त भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष अगस्ट १५ मा स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको छ । भारतले बिहीबार ७३ औँ स्वतन्त्रता ...
रजनीकान्तलाई प्रश्न : के तपाईं भारतमा अर्को एउटा 'महाभारत' चाहनुहुन्छ ?
नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । नेता तथा तमिल सुपरस्टार रजनीकान्तले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहलाई दिएको ‘कृष्ण–अर्जुन’ संज्ञाका कारण उनीमाथि पटाक्षेप भएको छ । जम्मू–कश्मीरको ...
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले यदि विवादित कश्मीरका कारण भारत र पाकिस्तानको युद्ध भए त्यसका लागि विश्व शक्ति राष्ट्रहरू जिम्मेवार हुने बताएका छन्। त्यसलाई थप अर्थ्याउँदै उनले कश्मीरको हैसिय...
नेपाल र भारतबीच विन-विनको अवस्था बनाएर बढ्नुपर्छः भारतीय राजदूत पुरी
news24nepal.tv . ५ महीना अघि
काठमाडौं । नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीले नेपाल र भारतबीच विन–विनको अवस्था बनाएर विकास र समृद्धिको यात्रामा साझेदारहरु भइरहेको बताउनुभयो । दुई देशबीच विगतमा भएका सन्धी सम्झौताले सार्...
‘अब हरेक भारतीयले भन्न सक्ने छन्–एक देश, एक संविधान’
स्वतन्त्रता दिवसमा नरेन्द्र मोदी भारतमा बिहीबार ७३ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै छ । अंग्रेजको अधिनबाट मुक्त भएको ७२ वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीबार बिहान दिल्लीको लाल किल्लामा विशेष सामारोह भएको छ । ...
नेपाल-भारतबीच विन विनको अवस्था बनाएर बढ्नुपर्छ– भारतीय राजदूत पुरी
काठमाडौं । नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीले नेपाल र भारतबीच विन विनको अवस्था बनाएर विकास र समृद्धिको यात्रामा साझेदारहरु भइरहेको बताए । २९ असारमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भारतको ७३ औं स...
काश्मीर पुगेर मोदीलाई इमरान खानको गाली, भने–तिमीलाई भारी पर्नेछ
इश्लामावाद । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मु काश्मीर मामिलामा संविधानको ३७० धारा खारेज गर्नुलाई हिटलरले जस्तै अन्तिम कार्ड खेलेको आरोप लगाएका छन् । ...
अनुपम खेरले मोदीलाई दिए आफ्नो आत्मकथा, मोदीले दिए यस्तो जवाफ
hamrakura.com . ५ महीना अघि
काठमाडौं । बलिउडका सबैभन्दा चर्चित नाममध्येको एक नाम हो – अनुपम खेर । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफ्नो किताब भेट दिएका छन् । खेरले आफ्नो आत्मकथा लेखेका छन् । जसको नाम 'लेसन्स लाइफ ...